10 Shirkadaha caanka ах ee loo yaqaan "Компанія з розвитку плагінів WordPress"
Istaraatiijiyada isticmaalka CMS iyo saamiyada suuqa (джерело: W3Tech).
Sababta ugu muhiimsan ee u shaqeysiinta shaqadeeda website WordPress waa fureerooyinka. WordPress ayaa awoodda oo dhan ka soo jiidata. Кобчінта користувацький плагін WordPress waa dookh kale oo keena awooda website-ka ganacsigaaga.
У цій публікації Waxaan doonayaa inaan ku siiyaan liis gaar ah oo a mid ka a toban USA shirkadaha horumarinta плагін WordPress ee kaa caawin doona sameynta bogga internetka ee ganacsi oo cajiib ах.
1 Shirkadaha caanka ах ee loo yaqaan WordPress Plugin Development Plugin ee dalka Mareykanka
1.1 1. ТОВ WordSuccor Ltd.
1.2 2. Варшиль
1.5 5. Студії Webdev
1.6 6. Вісім25медіа
1.8 8. Іскудуваха інтерактивний
1.9 9. Медіа блакитного фонтану
Shirkadaha caanka ах ee loo yaqaan WordPress Plugin Development Plugin ee dalka Mareykanka
1. ТОВ WordSuccor Ltd.
WordSuccor Ltd. є середньою серединою ах ширкада horumarinta webka WordPress ee ugu weyn Mareykanka. Markii la aasaasay 2011, wuxuu u korayaa si baahsan oo intaas ka dib, dib uma eegin gadaal. Iyada oo ka sareysa 45 + horumariyayaal khibrad leh, WordSuccor waxay soo gudbisay websaydhka 1,000 oo leh qiime qanacsanaan ах oo ах 98%.
WordSuccor waxay bixisaa adeegyo horumarineed oo horumarineed oo WordPress ах о середині ах таас оо хешай каан у ах хорумарка WordPress ee horumarinta khaaska ах. Waxay leeyihiin khibrad ku filan oo lagu kobcinayo плагін khaas ah oo kaa caawin kara sidii loo kobcin lahaa shaqeynta bogga ganacsigaaga. Kaalintooda waxaa si gaar ah loogu talagalay inay la midoobaan ganacsigaaga KPI. Sidaa darteed, sidoo kale віск soo saar.
Ваа іаад сиїсаа фікрад ка хо інтаадан тагін ширкад хорумариновий оо WordPress ах.
Teknolojiyada Varshyl waxaan ku fadhiyaa lambarka laba lambarka liiska. Waa середина Aad у caan ах наqshadaha gaarka ах ee mawduucyada WordPress iyo плагіни. Waxay ka shaqeeyaan Milpitas, Каліфорнія – США. Waxay sidoo kale leeyihiin xididada Hindiya iyo Australia. Inkastoo, waxay leeyihiin mawaarinno kala duwan oo ay ku leeyihiin карта-xirfadeedka, haddana horumarinta WordPress-ga ayaa ah sida USP-da.
Adeegyadooda waxay ku kala duwan yihiin здалеку tiirar oo kala duwan,
CMS рішення на замовлення
Waxay мав iyo jeer ilaaliyaan diiradda saaraan tayada, asalka iyo farshaxanka farshaxanka ee dhammaan khidadaha caadooyinka ах ee loogu talagalay gaar ahaan baahiyaha ganacsigaaga.
Macrosoft Inc waa Нью-Джерсі oo saldhigeedu yahay IT-да. Waxay si fiican u yaqaanaan adeegyadooda gaar ahaan koritaanka webka WordPress. Hase yeeshee, waxay hadda leeyihiin shaqaale 300, si kastaba ha ahaatee, taasi ma ahan tirada kuwa horumariya. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin liis dheer oo macaamiisha ах kuwaas oo ka dhigan horumarka website-ka ilaa horumarka WordPress.
Shirkadu waxay ku fadhidaa suuqa oo ku dhawaad ​​sanadaha 20. Tani waxay siinaysaa faa’iido u leh waayo-aragnimadooda tartanka. Adeegyadooda horumarinta WordPress, waxay bixiyaan adeegyo kala duwan ee horumarinta WordPress. Darajooyinkan waa horumarinta веб-сайт WordPress, horumarinta mawduuca WordPress, Adeegyada dayactirka WordPress iyo horumarka WordPress. Iyadoo khibradda noocaas ах ay leeyihiin aaggan, waxay yihiin doorasho suurta gal ah markaad raadineyso adeegyada horumarinta WordPress.
Baymediasoft waa shirkad horumarineed oo si fiican loo og yahay oo Maraykanka ku salaysan. Iyadoo ay ka soo baxayso in ka badan bogagga 1800 ee 400 + macaamiisha faraxsan, waxay ku raaxeeysan yihiin doorashada ugu badan ee loogu talagalay adeegyada horumarinta WordPress. Waxaa si fiican loo yaqaanaa in la siiyo xalal gaar ah oo horumarinta WordPress.
Waxay yihiin xirfadlayaal aad u tababaran oo had iyo jeer raadinaya nikwadal kala duwan oo xitaa miisaaniyada yaryar. Horumarintooda xirfadlayaasha ах waxay bixiyaan adeegyo horumarineed ee ugu horumarsan webka oo leh qaabka ugu sareeya.
5. Студії Webdev
Waxay daboolaan walxo kasta oo ka mid ah horumarka webka WordPress. Si kastaba ha ahaatee, adeegyadooda horumarinta WordPress ee plug-u-sameynta waa kuwo cajiib ах. Waxay si fiican u yaqaanaan, koodhkooduna waa ammaan. Waxay doorbidaan maaha oo kaliya inaad soo bandhigto dhammaan waxyaabaha aad rabto. Waxa kale oo ay soo jeedinayaan sifooyin dheeraad ах ах aad ubaahan karto mustaqbalka marka ganacsigaagu uu ballaariyo.
Liisaska macmiilka ayaa sidoo kale qiimahoodu raadinayaan sidii ay u shaqeyn jireen oo ay u sameeyeen bogagga internetka ee shirkadaha kala duwan ee shirkadaha Xiriirka Discovery iyo Starbucks. Waxay kaloo aaminsan yihiin in ay barayaan macaamiishooda.
Sida magacaba ka muuqata, Eight25media waa hal talaabo oo horay loo sii wado shirkad. Waxay ku saleysan tahay Fremont, Каліфорнія. Waa abaalmarin ku guulaysatay dooxada saliida leh ee кремній. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale leeyihiin xirfad ku saabsan adeegyada horumarinta WordPress ee плагін. Iyada oo adeegyadooda tayo leh, waxay kor u qaadeen ilaa $ 500 Malaayiin lacag ах.
Tani waxay sheegaysaa waxyaabo badan oo ku saabsan adeegga tayada ay bixiyaan macaamiishooda. Waxay qorsheynayaan qorshaha horumarinta marka hore, markaa, waxay bixiyaan adeegyadooda la-talinta si ay u bixiyaan xalka ugu fiican ee ganacsigaaga.
Tani waa halka ay adeegyadooda horumarinta плагін a ka ka duwan yihiin kuwa kale. Ma aha oo kaliya inay sameeyaan плагін, waxay u kobciyaan wakhtiga la siiyey. Xalkoodu шлях kala duwanyihiin waana mid aad waxtar u leh.
Codsiyada qiimaha markii ugu horaysay lagu soo bandhigay 2004. Qaybta ugu fiican ee shirkadani waxay tahay inay leeyihiin koox weyn oo ah 450 + horumariye xirfadlayaal ах о maareyn kara mashaariic dhowr ah waq Tani waxay siineysaa qulqulo waxqabad oo u horseedaya inay gaaraan alaabo tayo sare leh macaamiishooda.
Waxay leeyihiin macaamiisha 1,500 + macaamiisha faraxsan oo leh qadarin xajisan oo ах ах 96%. Tani waxay ina tusaysaa sida ay ugu wanaagsan yihiin adeegyadoodu maaddaama macaamiisha a dooranayaan marar badan.
Adeegyadooda horumarinta WordPress ee gaarka ах waxay sidoo kale aad u muhiim ах. Waxay caan ku yihiin inay naqshad galaan plugin oo gaar u ah boggaaga WordPress iyo nooca ganacsiga. Waxaad ku tiirsanaan kartaa iyaga si aad u siisid xalka ugu fiican ee ku xiran dhibaatada плагін WordPress ах ama su’aal.
8. Іскудуваха інтерактивний
Iskuduwaha Interactive waa shirkad horumarineed oo Internet ah oo ku taala Manhattan ee Нью-Йорк. Shirkaddu waxay bixisaa naqshado dhammaystiran iyo adeegyo horumarineed kuwaas oo ku xirnaan doona nooca ganacsigaaga.
Waxay kaliya oo aan abuurin shabakadaha laakiin waxay sidoo kale horumarinayaan khidadaha caadooyinka ах ee gaar ahaan loogu talagalay inay ku siiyaan shaqada aad rabto website-kaaga ganacsi.
9. Медіа блакитного фонтану
Blue Fountain Media waa hey’ad suuq geyn oo cajiib ах, oo ku taala Manhattan kaas oo bixiya adeegyada horumarinta webka aduunka ugu wanaagsan adoo isticmaalaya WordPress. Shirkadu waxay la shaqeysay kumanaan ganacsiyo caan ah oo ay ka mid yihiin adeegyada madadaalada iyo tiknoolajiyadda.
Waxay khabiir ku yihiin falanqaynta feylalaha PSD та aad u qurux badan, si fiican loo qoondeeyey mawduucyada WordPress iyo plug-ah WordPress. Iyadoo gargaarkooda, waxaad samayn kartaa website-ka hodanka ах ee hodanka ах ee websaydhka ах oo ku socda wakhti degdeg ах.
MarkupBox waa bixiye adeegga horumarinta WordPress oo joogto ах ao bixiya adeegyo tayo sare leh oo horumarineed oo WordPress ku saleysan macaamiishooda.
Shirkaddu waxay bixisaa adeegyo beddelaad oo naqshad ах sida PSD-ga HTML, HTML si loo helo boggaga WordPress-ga ah iyo qalabka WordPress ee caadooyinka ах qiimaha la awoodi karo. MarkupBox waxaa lagu soo buuxiyaa niyadjab iyo naqshad heer sare ah oo horumarineed iyo horumariyayaal kuwaas oo shaqadooda u keeni doona meel bannaan.
Топ-8 плагінів соціального обміну для WordPress